Soo Degso In kabadan 100 Tusaalooyin Infographic ah $ 59 | Martech Zone
Isniin, November 18, 2013 Sabtida, Oktoobar 20, 2018 Douglas Karr
Shirkado aad u tiro badani ma awoodi karaan naqshad buuxda iyo istiraatiijiyad dhiirrigelin ah oo loogu talagalay sawir-qaadista. Xirmooyinkayagu waxay ku kala duwan yihiin qiimaha laakiin sida caadiga ah waxay ka bilaabmaan qiyaastii $ 2,500 cilmi baarista, naqshadeynta iyo kor u qaadista asalka asalka ah Dabcan, taasi way ka fogtahay miisaaniyadda shirkado badan. Shirkadaha sameeya naqshadeeyayaashuna maheyn karaan inay maalmo ku shaqeeyaan fikradaha ku saabsan faahfaahinta macluumaadka! Xaqiiqdii, waxaan ogaanay in muuqaalaynta xogta ay tahay hibo gaar ah oo aan laga helin naqshadeeye kasta.
Laakiin… haddii aad leedahay nashqadeeyaha oo aad jeceshahay inaad soo saartid qaab muuqaal ah oo la siiyay qaar ka mid ah tusaalooyinka, wiil saaxiibbadayada ah ee ku jira bogga Infographic.li waxay leeyihiin heshiis la yaab leh $ 59 US, waad awoodaa kala soo bixi in ka badan 35 nooc oo u gaar ah 105 nooc oo kala duwan! Hubso inaad isticmaasho xiriiriyeheena xiriirka si aad ugu keydiso tan dalabkan!
Iibso Mawduucyadaada Sawiraha Hadda!
Faylasha waxaa lagu heli karaa Photoshop (PSD), Illustrator (AI), Encapsulated PostScript (EPS) iyo Jpeg (JPG) qaabab! Waa kuwan hal tusaale si aad u aragto tayada iyo waqtiga kuwan soo galay:
Tags: soo dejiso infographicstusaalooyinka infographicsinfographicfaahfaahin infopssawir gacmeedinfographic psdtusaalooyin infographicMacluumaadka Suuqgeynta